အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့
အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို စစ်ရေးနည်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်လို့မရနိုင်ဘဲ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်း ဖြစ်တဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်းနဲ့သာ တည်ဆောက် သွားကြရပါမယ်လို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား လေးဖွဲ့ထံ လိပ်မူပြီး ဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ ပေးပို့တဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာ ရေးသားထား ပါတယ်။
မွေးနေ့ဆုတောင်းအဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသာ လိုချင်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဌာနချုပ်ရုံးတွင် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် ၆၆ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စာဟာ လတ်တလော အစိုးရနဲ့ စစ်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲနေတဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ MNSP နဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA တို့ကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာ တိုက်တွန်းထားတာပါ။
ဒီ စာမှာပါရှိတဲ့ အပိုဒ်တပိုဒ်ကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးအုန်းကြိုင်က ဖတ်ပြပါတယ်။
“ပဋိပက္ခများနှင့် ပြဿနာများကို အင်အားသုံး ဖြေရှင်းကြမည် ဆိုလျှင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုး ဆုတ်ယုတ်မှု များသာ ဖြစ်ပေါ်ပါမည်။ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို စစ်ရေးနည်းလမ်းများဖြစ် တည်ဆောက် မရနိုင်ပါ။ နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းဖြစ်သော ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်း ဖြစ်သာ တည်ဆောက် သွားကြရမည် ဖြစ်ပါသည်”
စာ နိဂုံးမှာတော့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပံ့ပိုးရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ ပါဝင်ကြိုးပမ်းဖို့ အသင့်ရှိတဲ့အကြောင်း ရေးသားထားပြီး လက်မှတ်ရေးထိုး ထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာပါ အသေးစိတ် အကြောင်းအရာတွေကို ဒေါ်စမ်းစမ်းတင်က ဆက်ပြီး တင်ပြပါလိမ့်မယ်။
မအူပင်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လာဖို့ မြို့ခံလူငယ်တွေ မေတ္တာရပ်ခံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကန့်ကွက်ချက် တိုင်းကော်မရှင်က ပယ်ချ
မြန်မာ့ ပညာရေးစနစ် ကောင်းမွန်စေဖို့ ဆန္ဒရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဆက်ပြီး ကြိုးပမ်းမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ပါတီ မှတ်ပုံတင်ဖို့နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုကို စစ်ဆေးဖို့ လက်ခံလိုက်ပြီ
You bet. The govt & its mouth piece News Papers will accuse that NLD is taking Political Advantages, No sicereity etc etc.
Jul 28, 2011 08:28 PM